Mealy dew | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Mealy dew
Antony mahatonga ny fitomboan'ny Clematis sy ny fanafoanana azy ireo
Matetika, mamboly zavamaniry zavamaniry, manantena ianao fa hitsiry sy hampifaly ny maso izy ireo. Indraindray anefa dia mitranga ny zavamaniry. Amin'ity tranga ity dia tsy hahita voninkazo manitra na ravina mamiratra tsara ianao. Ity lohahevitra ity dia natao hanampiana ny Clematis, izay nahatonga ny "aretina". Hodinihintsika ny antony mahatonga ny clematis ho ratsy, inona no hatao raha voan'ny parasy ny hazo, ahoana no hiarovana ny kirihitra amin'ny hatsiaka sy ny maro hafa.
Ny aretina sy ny bibikely manimba sy ny fomba fiasa hiadiana amin'izany
Rehefa miseho ao an-tranonao farafaharatsiny iray, dia miomàna amin'ny fanafihan'ny aretina sy ny karazana bibikely isan-karazany. Saingy mihazakazaka kely aloha, te-hiteny isika fa ny fomba lehibe indrindra hisorohana izany dia fepetra fisorohana tsy tapaka. Noho izany, ny fahazoana zavamaniry vaovao dia tsy maintsy atao amin'ny fisoratana avy amin'ny zavamaniry hafa izy io ary hiantoka ny fahasalamany ara-pahasalamana.
Nahoana no tsy mitombo ny hydrangea, ny aretina voalohany amin'ny voninkazo
Ny hazo lavalava mahavokatra dia afaka manamboatra trano fialofana na varavarankely, saingy indraindray ny hatsaran-tarehy rehetra dia mety ho simba noho ny aretina. Tsy dia misy fahasamihafana eo amin'ny zaridaina sy ny lakana ao anaty zaridaina. Noho izany, etsy ambany dia hianatra amin'ny antsipiriany izahay amin'ny fomba hanasitranana ny hydrangea, na inona na inona karazana sy toeran'ny fambolena.
Karazam-pambolena sy fikarakarana gilasy amin'ny trano fatoriana fahavaratra
Ny voninkazo dia voninkazo marevaka, fambolena sy fikarakarana bebe kokoa ary ny famokarana dia tsy mitaky ezaka be. Mba hampitombo azy ireo any an-tany malalaka, tsy mila fahalalana sy fahaizana manokana ianao, ary ny fahasamihafan'ny varotra dia azafady na dia ny florist aza. Inona ny fitiavam-pitiavana, ny fepetra tsara indrindra amin'ny fambolena voninkazo Raha toa ianao ka tsy anisan'ireo izay tsy te-hijery fotsiny ny grenady amin'ny sary, fa mamolavola azy ao amin'ny zaridao, dia manapakevitra voalohany amin'ny toerana iray.
Ny aretina voatabia sy fomba fampiharana azy ireo
Maro ny aretina ao amin'ny voatabia. Ny fahalalana azy ireo dia hahasoa ireo rehetra izay maniry voatabia mba hahazoana vokatra matsiro, mahasalama, ary malalaka. Androany isika dia mijery ireo aretina mahazatra amin'ny voatabia izay mety ho hitanareo. Ny aretina bakteria amin'ny voatabiha: ny soritr'aretina, ny fomba fifehezana Ny antony mahatonga ny aretina bakteria amin'ny voatabiha dia bakteria isan-karazany, mitarika ho amin'ny fahafatesan'ny zavamaniry, ny fihenan'ny voankazo sy ny kalitaon'ny voankazo.
Matetika ny kirihitr'ala izay mitombo ao amin'ny toerana iray mandritra ny fotoana lava, dia misy fiantraikany eo amin'ny loto ny vovobony. Tsy ny mpamboly tsirairay no hanapa-kevitra ny hiala amin'ny kirihitra toy izany, indrindra raha be karazan-javamaniry tsy fahita firy izany. Noho izany, ny fanontaniana tena misy dia ny fomba hisorohana ny aretin-koditra. Misy fomba maro samihafa handresena ity holatra ity.
Asters: aretina sy bibikely, miady aminy
Maro ireo mpamboly zavamaniry no mamolavola zavamaniry isan-karazany any an-tanimboliny. Misy karazany 500 mahery. Ny Astraga dia nambolena tao am-pandriana, nampiasaina ho an'ny sisin-tany, rabatok, hanamboatra lavarangana na tanimbary, mba hanangonana fehezam-boninkazo tsara tarehy sy felam-boninkazo. Saingy, indrisy, ny hatsaran-tarehy rehetra aterak'izany hatsaran-tarehy rehetra izany, izay nahitan'ny mpikaroka mihoatra ny iray.
Ahoana ny fomba fitsaboana sy fisorohana ny aretina amin'ny laisoa
Ny fambolena an-jaridaina rehetra, anisan'izany ny lozika, dia mora voan'ny aretina. Mora kokoa ny manamboatra fepetra amin'ny fisorohana ny famonoana azy noho ny fanasitranana ireo olona efa nividy. Ankoatr'izany, ny sasany amin'izy ireo dia tsy azo zakaina. Ny aretina bakteria sy viralalin'ny lozika: ny soritr'aretina sy ny fomba fifehezana Ny ampahany amin'ny voamaina rehetra ao amin'ny laisoa dia ambony noho ny tany, ka noho izany, ny fanafody simika misy poizina hamonoana ireo aretina lozika dia ny hanimba ny fahasalamany manokana.
Phlox - tena famolavolana ny zaridaina rehetra. Ny fofona maivana, ny felam-boninkazo tsara tarehy avy amin'ny alokaloka samihafa dia hampifaly ny tompony mandritra ny fahavaratra. Ireo voninkazo ireo dia tsy mitaky fikarakarana manokana raha tsy marary. Mampalahelo fa marary ny phloxes, toy ny olona. Ary tsy voatery ho azo tsaboina izy ireo (indrindra raha tsy voamarikao ny soritr'aretina voalohany).
Ny toro-hevitra tsara indrindra momba ny fikarakarana sy ny fambolena Buldenezh
Kalina Buldenezh (amin'ny teny frantsay hoe "Boulede Neige" - globe globe) - karazana ravinkazo, karazana volom-borona misy ranomandry be dia be. Ny plant dia tena malaza amin'ny zaridaina, na dia tsy mitondra vokatra aza izany. Ny toetra sy ny toetoetran'ny viburnum Buldenezh Ity karazana ity dia antsoina hoe voatsiram-potaka, satria tsy misy ny voninkazo.
Ahoana no hiatrehana ny aretina amin'ny paosy
Ny tanjon'ny mpamboly dia voankazo feno voankazo. Na izany aza, mba hitomboanao izany dia mila mikarakara tsy tapaka hazo fihinam-boa ianao, hiditra amin'ny fisorohana sy fitsaboana aretina. Ary maro ireo loza mety hitranga amin'ny hazo. Ny pesta dia mety miteraka aretina maro. Rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity ianao, dia hianatra momba ireo aretina mahazatra indrindra amin'ny pear, momba ny fomba fisorohana sy fitsaboana azy ireo.
Ny fomba hiatrehana aretina sy bibikely viola
Viola (pansies) - iray amin'ireo zavamaniry mahazatra indrindra ao am-pandriana ary rabatkah, tian'ny mpamboly maro. An'ny fianakaviana violet. Mampiasaina ihany koa ho an'ny logogasy fandroana, balconies, arbors. Fantatrao ve? Ny Grika fahiny sy ny Romanina dia nanamboatra ny efitranony niaraka tamin'ny viola nandritra ny fialantsasatra sy nandritra ny fety.
Ny fomba hanasitranana hazo apela amin'ny aretina, fomba mahomby
Ny hazo mitombo be ao amin'ny firenena dia sarotra kokoa noho ny mety hiseho amin'ny voalohany. Mba hikarakarana tsy tapaka ny vokatra tsara, ilaina ny mikarakara hazo fihinam-boa, mahafantatra ireo aretina lehibe amin'ny paoma sy ny fitsaboana azy ireo. Momba ny aretin'ny hazo poma, ny ravina sy ny fomba fitsaboana dia hodinihina ato amin'ity fitaovana ity. Fantatrao ve?
Ahoana ny hiatrehana ny aretina arakaraky ny aretina
Raha simban'ny aretina ny orsa iray, dia aza mamoy fo ary mamarana ny fotoam-pijinjana. Ny ankamaroan'ny aretina dia tsy sarotra ny mandresy. Ianao dia tokony handrisika anao amin'ny faharetana, fanolorana avy amin'ny mpikaroka za-draharaha sy ny vokatra fanaraha-maso ny aretina izay mora azo amidy amin'ny fivarotana manokana.
Bibikely sy aretina goavana
Pumpkin isika dia miantso legioma manana loko manga manjelatra. Ny zavamaniry dia avy any Amerika Atsimo, na dia ao amin'ny firenentsika aza, miankina amin'ny fambolena sy ny fahasamihafana, ny voankazo dia afaka mahazo 1 metatra sy sasany, izay manana maherin'ny 200 kilao. Ny voamaina ary ny voamadinika dia ho levona ho sakafo, fa ny hoditry ny legioma kosa dia tsy misy dikany intsony, satria tena manify, manjavozavo ary tsy misy tsirony.
Dill dia zavamaniry isan-taona hatramin'ny 125 santimetatra ny haavony, ny elanelana dia hola, ny ravina matevina dia marefo, ny voninkazo misy loko mavo dia manamboatra elo, sarobidy, endrika oval mofomamy - voa. Dill dia zavamaniry tsy dia mendri-kaja, fa matetika no voan'ny aretina isan-karazany izay manakana ny mpamboly tsy hanambolo voly tsara.
Ahoana no hiatrehana aretina mitaiza
Radisy dia manondro ny vokatra amam-bony vao haingana izay voan'ny aretina. Na izany aza, mbola mitranga izany. Ny fambolena sy ny fambolena mety dia hanalavitra ny ankamaroan'izy ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny famantarana sy ny fomba fiadiana amin'ny aretina radi. Io zavamaniry io dia afaka mandresy ny viriosy sy ny fungi pino.
Inona no tokony hatao raha toa ka mipoaka ny orkide?
Ho an'ny mpamboly iray, manova ny endriky ny voninkazo lehibe dia antony lehibe iray hieritreretana ny fahasalamany. Toy izany koa ny orkide, trondro maranitra no hita eny amin'ny ravina - mitady hatrany ny antony. Tsara homarihina fa io tranga io dia tsy voatery manondro ny ilana ny hikaroka ilay orinasa, saingy tsy azo atao izany.
Manao ahoana ny hiatrehana menaka varahina amin'ny raozy
Mealy dew dia iray amin'ireo aretina mahazatra indrindra ary mahasosotra maro be izay mijaly. Ilaina ny miady aminy, satria ny vokatry ny aretina tsy voamarina dia ny fahafatesan'ilay orinasa. Indrisy fa tsy mahafinaritra rehefa manimba ny hatsaran'ny zavamaniry ny zavamaniry. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia tiantsika ny hizara ny tolo-kevitra momba ny fomba hisorohana ny ranon-tsavonavoka amin'ny raozy ary ny tokony hatao raha toa ka mamely ny voninkazo izy.
Ahoana no hiatrehana ny aretin-koditra vita amin'ny vovobony eny amin'ny toeram-pambolena
Ny alikaola (tahaka ny lavenona, lamba rongony) dia aretina mahazatra sy tena mampidi-doza izay miseho amin'ny zavamaniry any ivelany sy eny ivelany ary mitaky fitsaboana avy hatrany. Ny zava-mampidi-doza sy ny toerana misy ny mildew dia mampidi-doza ho an'ny zavamaniry, tsy noho ny fahaverezan'ny toetrany mampiavaka azy, fa koa amin'ny fisehoan'io aretina io, ny zavamaniry dia mahavelona ny sakafo, ny fizotran'ny photosynthesis, ny respiration ary ny fivalanana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Mealy dew